Home Wararka Qoor Qoor oo dagaal ku qaaday fariisimada Ahluaunna
Qoor Qoor oo dagaal ku qaaday fariisimada Ahluaunna
Milatariga Soomaaliya oo kaashanaya ciidanka amaanka Galmudug ayaa maanta oo talaado ah qaaday guluf dagaal oo ka dhan ah ciidan taabacsan Sheekh Maxamed Cali Xasan oo dhawaan qabsaday degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud.
Ciidankaan ka ruuqaansaday magaaladda Dhuusamareeb ayaa xalay saqdhexe guddaha u galay deegaanka Ceeldheere oo u dhexeeya degmadooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ee Bartamaha Soomaaliya sida ay Mustaqbal Media u sheegeen dadka deegaanka.
Saraakiisha hoggaaminaysa ciidanka ayaa u sheegay Mustaqbal in u jeedkoodo yahay in ay dib ula wareegaan “magaaladda ganacsiga caanka ku ah ee Guriceel” ka dib 12 maalmood ay maamulayeen ciidanka Ahlusunna.
Dhanka Guriceel ciidanka Ahlusunna ayaa ka wada dhaqdhaaqyo ay ku doonayaan in ay difaacdaan maamulka magaaladda, waxaana iskaga bakacay shacabka oo cabsi xooggan ka qaba in lagu dul dagaalamo.
“Magaaladda dadku horay ayay uga barakeceen hadana intii hartay ayaa naftooda kala baxsanaya” ayuu Warbaahinta u sheegay mid ka mid ah ganacsatada magaaladda oo diiday in aan xigano magaciisa.
Gudoomiyaha deegaanka Ceeldheere Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xaduur oo la hadlay warbaahinta Galgaduud ayaa sheegay in xaaladda deegaanka ay dagantahay qorshahoodu yahay in ay dagaalamaan Al Shabaab.
Hadalkaan ayaa imaanaya iyada oo guuldaraysteen dadaalo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug maadaama laba dhinac ay ku adkaysteen shuruudo ay dalbadeen in marka hore la fuliyo.